China SPC Ft 1901 Nlụpụta na Factory | N'akụkụ
Nkọwapụta: 1210 * 183 * 6mm
Ihe dị iche n’etiti LVT / ala SPC / ala WPC
Lọ ọrụ ụlọ elu amalitela ngwa ngwa n’ime afọ iri gara aga, ụdị ụdị ụlọ ọhụrụ apụtawo, dị ka ụlọ LVT, WPC osisi plastik na SPC floor floor. Ka anyị leba anya na ọdịiche dị n’etiti ụdị ụlọ atọ ndị a.
1 LVT ala
1. LVT n'ala Ọdịdị: esịtidem Ọdịdị nke LVT n'ala n'ozuzu na-agụnye UV agba oyi akwa, na-eyi na-eguzogide oyi akwa, agba film oyi akwa na LVT ọkara isi oyi akwa. N'ozuzu, usoro ihe mgbakwasị ụkwụ dị larịị atọ nke LVT. Iji meziwanye nkwụsi ike akụkụ nke ala, ndị ahịa ga-achọ ụlọ ọrụ iji tinye eriri eriri iko na akwa oyi akwa iji belata nrụrụ nke ala nke mgbanwe okpomọkụ na-eweta.
2 WPC ala
1. WPC n'ala Ọdịdị: WPC n'ala nwere agba oyi akwa, eyi na-eguzogide oyi akwa, agba film oyi akwa, LVT oyi akwa, WPC mkpụrụ oyi akwa.
3 SPC ala
Nhazi nke ala SPC: ugbu a, ala SPC dị n'ahịa ahụ gụnyere ụdị atọ, otu akwa oyi akwa SPC nwere nkwekọ ntanetị, usoro AB jikọtara ya na LVT na SPC na SPC nke mejupụtara ụlọ ABA Ihe osise na-esonụ na-egosi otu ụdị akwa SPC.
N'elu bụ ọdịiche dị n'etiti ala LVT, ala WPC na ala SPC. Typesdị ala ụlọ ọhụrụ atọ a bụ ihe nkwekọrịta nke PVC ala. N'ihi ihe ndị pụrụ iche, a na-ejikarị ụdị ala atọ ndị a eme ihe n'ụzọ zuru ezu ma e jiri ya tụnyere ala osisi, ọ na-ewu ewu na ahịa Europe na America. Ahịa ụlọ ka ga-ewu ewu
N'ozuzu Oke 6mm
Nkọwapụta nha 1210 * 183 * 6mm
Ihe na-eguzogide ụkwụ na-aga / Pass EN 425 Omenala
Nke gara aga: Ogige SPC 503
Osote: SPC Ala 1902
SPC Ala 1905
SPC Ala 1908
SPC Ala 1907
SPC Ala 1913